Functionallọ ọrụ alloy na-arụ ọrụ pụrụ iche - ndị na-emepụta alloy, ndị na-eweta ọrụ
Companylọ ọrụ anyị nwere akụkọ ihe mere eme nke afọ 60 na ịmepụta igwe anaghị agba nchara. Site na ịhọrọ ihe ndị dị elu na ịnakwere usoro ịgbaze nke okpukpu atọ nke electroslag + ọkụ na-eme ka ọkụ na-ere ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na-ere ọkụ ọkụ, ngwaahịa ndị ahụ dị oke mma na ịdị ọcha na ịdị n'otu. . A ga-enye usoro nke Bar-waya na eriri tebụl.
Metal eriri na ya ngwaahịa nke abụrụ ọhụrụ ọtọ ihe na-adịbeghị anya. Ejiri eriri dị elu mara mma, arụmọrụ dị elu dị elu, mmezi ọkụ eletrik dị mma, mgbanwe dị mma, ihu ọma nke na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ ma na-eguzogide ọgwụ dị mma.
N'oge a, ndị na-esi nri na ndị na-esi nri ọkụ ọkụ abụrụla igwe ọkụ eletrik na kichin. Ndị na-esi nri na-enweghị ike ịrụ ọrụ na ọnọdụ nke obere ọkụ, nke a na-enwupụta ọkụ electromagnetic na-emerụ ahụ maka ndị mmadụ. ume. Iji mezuo ụkọ nke osi ite, e mepụtara ngwaahịa ọhụrụ maka osi ite maka iko ndị toro oke iko dị n'ụlọ na mba ofesi.
Fe-Cr-Al mkpa obosara warara mepụtara anyị ụlọ ọrụ, na akụkụ nke alloy gbazee nhọrọ, ka nke elu àgwà ngwaọrụ dị ka ferrite, ferrochrome, aluminum ingot, ọ na-gbazee site abụọ electro-slag agbaze. nke mejupụtara kemịkal, site na ịbawanye Thulium element, a na-emeziwanye ọxịdashọn na oge ndụ nke alloy.
A na-eji ụdị lụrụ ọgụ dị iche iche nke locomotive braking dị ka ihe ndị bụ isi nke locomotives eletriki, locomotives dizel, locomotives na ụzọ ụgbọ oloko, ụgbọ oloko dị elu; Na ụdị ndị ahụ nwere njirimara zuru oke nwere nguzogide dị elu ma kwụsie ike, nkwụsị nke ikuku oxidation, corrosion na-eguzogide; mgbochi ịma jijiji ka mma, nkwụsị na-eguzogide n'okpuru ọnọdụ dị elu nwere ike izute mkpa nke eletriki locomotive braking Resistor.
Invar 36 alloy, nke a makwaara dị ka alloy invar, ka eji na gburugburu ebe obibi chọrọ ọnụọgụ dị ala nke mmụba. Isi ihe nke Curie nke alloy bu ihe dika 230 ℃, n'okpuru nke alloy bu ferromagnetic na onu ogugu nke mmeba di ala. Mgbe ọnọdụ okpomọkụ dị elu karịa okpomọkụ a, alloy enweghị magnetism na ọnụọgụ nke mmụba na-abawanye. The alloy na-bụ-eji maka n'ichepụta akụkụ na kpọmkwem mgbe nile nke na nso nke okpomọkụ mgbanwe, na na ọtụtụ-eji redio, nkenke ngwá, ngwá na ndị ọzọ ọrụ.
Electric okpomọkụ Waya, N'ogbe High okpomọkụ Ọdụdọ Waya, Electric eguzogide Waya, Okpomọkụ eguzogide ọgwụ Ọdụdọ Waya, Electric Heating Waya, Electric Heating mmewere Waya Supplier,